Zụta ihe nbudata SoundCloud - SoNuker
Uru ndị dị a willaa ka m ga-ahụ ma ọ bụrụ na m zụta ihe nbudata SoundCloud?
Ọ na - enyere aka inweta nkwenye ngwa ngwa maka egwu gị
Ọ kwesịrị ka m zụta nbudata SoundCloud?
Mgbe ịlele usoro egwu na SoundCloud otu ihe ọmụma dị mkpa bụ ole nbudata ọ nwere. Mgbe ịzụrụ nbudata SoundCloud ị na - enyere aka ima elu ịmalite ego nbudata ị ga - enweta. Ọ bụrụ na onye nwere ike ịna-ahụ ihe gafere na ibe gị ma hụ ọtụtụ puku ndị ebudatara ụzọ, ha yikarịrị ka ha ga-ebudata ya. Nke a na - enyere aka iwulite ndị egwu ọhụụ egwu gị ma ọ bụ ọdịnaya.
Kedu mgbe m ga-enweta nbudata nke SoundCloud m?
Iwu niile amalite n’ime awa 24-72 ka etinyechara iwu gị. N'ọnọdụ ụfọdụ, ana-ebuga ọnụ ọgụgụ nke nbudata SoundCloud gị naanị awa ole na ole iji debe iwu gị, mana mgbe ụfọdụ ọ ga - ewe ụbọchị ma ọ bụ abụọ, dabere na ole ị nyere iwu.
Anyị na-ebugote nbudata anyị nke SoundCloud ọsọ ọsọ, yabụ ị ga - enweta ha n'oge.